सपनामा पैसा देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्
ramkrishna April 16, 2021	सपनामा पैसा देख्नु
कहिले सोच्नु भएको छ सपनामा के के देखिन्छ ? कहिले कहिँ हामी सपनामा निकै नै खुसि हुने गर्दछौ र कहिले निकै दुखि । विपना मा हुने अनुभव र महसुस सपनामा पनि हुन्छ । सपनाका फल हरु को बारेमा हामीले अर्को समाचार मा भनिसकेका छौ आज यहाँ सपनामा धन सम्पति पैसा वा अन्य कुनै रत्न देखेमा वा भेटेमा के हुन्छ भन्ने कुरा को बारेमा जानकारी दिदै छौ ।
यदि तपाई ले सपनामा मणि वा रत्न देख्नु भयो भने तपाई सँग तपाई को भाग्य बलियो छ भन्ने अर्थ हुन्छ । यस्तो चिज देख्न ले सानो काम ले पनि ठुलो प्रतिफल प्राप्त हुने लक्षण देखाउछ । तर याद राख्नुहोस सपना मा जति कुरा हरु भेट्नु हुन्छ त्यो सबै सपना हरु राम्रो हुन्छ भने हराएको वा गुमाएको सपना ले तपाई लै निराश तुल्याउछ ।
Previous Previous post: सपनामा पानी देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्
Next Next post: सपनामा रोएको देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्